vendredi, 24 janvier 2020 20:45
FJKM: 150 taona ny Toeram-panomanana Mpitandrina
Notanterahina, androany, teny amin'ny Fiangonana Anatirova Manjakamiadana ny fanokafana ny fankalazana ny faha-150 taona ny Toeram-panomanana Mpitandrina eo anivon'ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara.
vendredi, 24 janvier 2020 20:44
Ambondrona-Antananarivo: Tranon'ny Vaditany tra-tehaky ny Jirama nisintona herinaratra tsy mandalo kaontera
Tranon'ny Vaditany (Huissier de justice) iray eny Ambondrona no tra-tehaka nisintona herinaratra tsy mandalo kaontera nandritra ny fitsirihana nataon’ny Jirama.
Notapahana avy hatrany ny jiro tao amin'ilay trano ary ampanantsoina eny amin'ny Jirama ny tompon-trano ny Talata ho avy izao hanonitra ny saran'ny herinaratra nangalariny.
vendredi, 24 janvier 2020 19:22
Mahazoarivo: Nanao « fanambarana voinam-pirenena » ny Praiminisitra, miantso ny rehetra mba hifanome tanana
Manoloana ny voina izay nihatra tamin’ny faritra maromaro, izay nateraky ny rotsak’orana be loatra dia nampiantso fivoriana tsy ara-potoana ny filankevi-pirenena mikasika ny fitantanana ny loza sy ny tandindon-doza, amin’ny maha-filoha mpitantana io rafitra io azy ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta Ntsay Christian, androany, teny amin’ny Lapan’i Mahazoarivo.
Fivoriana izay nandinihana sy namakafakana ireo fahavoazana misy, ka ahafahana mamaritra paikady entina mitondra vahaolana sy fanampiana avy hatrany ho an’ireo traboina, ary hanarenana farany izay haingana ny fahasimbana misy, indrindra amin’ireo Faritra fito izay tena nitondra takaitra.
Raha ny tarehimarika voaray nandritra ny fivoriana dia fantatra fa manodidina ny 80 000 ny isan’ireo tra-boina, 21 no namoy ny ainy ary 20 no tsy hita popoka, tarehimarika izay mety hisy fiovana. Misy eo ankilan’izany ny fahatapahan’ny lalana maromaro, toy ny RN4, RN6, RN7, RN1 BIS, RN3A, RN34.
vendredi, 24 janvier 2020 17:22
Faritra Mahatsiatra Ambony: Manao fitia tsy mba hetra hanohanana ireo mpiray tanindrazana traboina vokatry ny andro ratsy
Manatanteraka voin-kava mahatratra ny Faritra Mahatsiatra Ambony, ho firaisam-po sy tolo-tanana hanampiana ireo mpiray tanindrazana tena voa mafy any amin’ny Faritra rahavavy niharam-pahavoazana vokatry ny andro ratsy izay mandalo eto Madagasikara.
Nanomboka androany ny hetsika ary hitohy tsy tapaka hatramin’ny Alatsinainy 27 janoary 2020 tolakandro, ka anentanan-dRazafindrafito Lova Paupil, Goverinoran’ny Faritra Mahatsiatra Ambony ny fiaraha-mientan’ny rehetra na sehatra miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana.
vendredi, 24 janvier 2020 17:15
Fiainan'ny Antoko: Nanatontoso fihaonambe ny AVI
Notanterahina tetsy amin'ny Carlton Anosy ny fihaonamben'ny antoko politika AVI, na ny Asa Vita no Ifampitsarana, izay notarihin'i andramatoa Norbert Lala Ratsirahonana.
Anisan'ny notsindrian'ny fihanambe fa tsy natao hialokalofan'ny jiolahy ny antoko AVI, ary mampanaja ny fanjakana tsara tantana.
Nanamarika ihany koa fa ao anatin'ny fifanajana sy fanampiana ny fitondrana no ampandroso ny Firenena, fa tsy ny fifanaratsiana sy ny fanalana baraka, na anatin'ny tsikera lava.
Nambaran'i Norbert Lala Ratsirahonana, tamin'ny lahateniny ihany koa fa tamin'izy nirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena dia hanafoana ny fisakafoanana atao isan-taona sy ny 26 jona eny amin'ny lapa-panjakana no anisan'ny teniny tamin'izany, izay amin'izao fotoana hitondran'i Filoha Andry Rajoelina izao vao tanteraka.
vendredi, 24 janvier 2020 15:03
Vovonan’ny mpanohitra: Hanao fikaonan-doha ny RMDM
Hanatanteraka ny fikaonandohan'ny mpanohitra ao amin'ny Carlton Anosy ny Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara (RMDM) rahampitso sabotsy 25 janoary 2020.
vendredi, 24 janvier 2020 14:31
Andekaleka: Nihena ho 35MW ny herinaratra vokariny raha tokony ho 92 MW
Tsetsin’ny fasika sy fako nentin’ny rano nandritra ny andro ratsy teo ny fivarinan’ny rano avy amin’ny toho-drano mankao amin’ny tobim-pamokarana herinaratry ny JIRAMA ao Andekaleka.
Niteraka fihenan’ny rano tonga ao amin’ny tobim-pamokarana izany, ary misy fiantraikany betsaka amin’ny famokarana herinaratra. 35MW sisa izany ankehitriny raha tokony ho 92 MW. Misy ny asa fanadiovana ny toho-drano hatry ny omaly ary nitohy tamin’ity androany 24 janoary ity.
vendredi, 24 janvier 2020 11:57
« Rocade Est - Nord Est »: 50 % ny asa no vita
Nidina ifotony nijery ny fivoarana sy fizotr'ireo tetikasa sy foto-drafitrasa vatsiany vola ny delegasiona avy amin’ny Banky Eoropeana ho an'ny Fampiasam-bola (Banque Européenne d'Investissement) tarihin’ny Filoha lefitra Mandalo eto Madagasikara.
Anisany ny « Rocade Est - Nord Est » izay lalana mamakivaky tanàna sy tanimbary mampifandray ny lalam-pirenena faha-3 sy faha-2 ary ny faha-7 mandalo ny By-Pass, izay tanterahin'ny orinasa SOGEA SATOM. 50 % ny asa no vita ankehitriny.
vendredi, 24 janvier 2020 08:15
Fantatrao ve: 128kg ny lanjam-bolamena tahiry ao amin'ny Banky foibe ny taona 2017
Hatreto aloha dia tsy misy an-tontanisa ofisialy momba ny lanjam-bolamena tahiry ao amin'ny Banky foibe Malagasy, ny hany fantatra tamin'ny fanambarana nataon'ny minisitry ny vola tamin'ny fiandohan'ny taona 2017, dia 128kg ny tahirim-bolamena ananan'ny Banky foibe Malagasy.
Ny atsy Maurice, izay tsy manana na karieram-bolamena iray aza, dia manana 11 tonnes volamena ny taona 2016, ary ny atsy Afrika atsimo dia manana 125.31 tonnes, Arabie Saoudite manana 323.07 tonnes, Zone Euro 504.77 tonnes, Suisse 1040 tonnes, Chine 1948.31 tonnes, Russie 2241.86 tonnes, France 2436.01 tonnes, Allemagne 3366.77 tonnes, ary ny Amerikanina no tompon'ny podium 8 133.46 tonnes.
Ny fananana tahirim-bolamena eo anivon'ny Banky foibe moa dia manamafy ny fifampitokisana eo amin'ny fandraharahana ara-bola iraisam-pirenena, ny fanomezana antoka amin'ny fampindramam-bola ataon'ny samy firenena na ny mpampindram-bola, ahafahana mamaritra ny petra-bola atao antoka, na fond de garantie.
vendredi, 24 janvier 2020 08:05
24 janvier: Journée Internationale de l'éducation
24 janvier: Journée Internationale de l'éducation.